Filim shukaansi ah - qalab loogu talagalay xayeysiis ubaxyo iyo hadiyado | LIFE PICKER - 2018
Filimada sheyga - qalab loogu xiro ubaxyo iyo hadiyado
Doorashada filimada daahfurka leh
Guryaha iyo faa'iidooyinka filimka polypropylene
Filim shumaca ah waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee alaabta wax lagu xiro ee loo adeegsado dhinacyo kala duwan. Caannimadu waxay sabab u tahay awood sare iyo caqabada ugu badan ee isbedelka. Waxaa ka sameysan polypropylene, kala duwanaanta width iyo cufnaanta, qaababka qurxinta ayaa lagu dabaqi karaa dusha sare.
Filimka leh qaabka midabku wuxuu ku haboon yahay naqshadaynta hadiyado iyo bawlaha. Bacaha khafiifka ah ma qarinayaan muuqaalka nacnacan la isku qurxiyo, quruxda ubaxa iyo burooyinkeeda. Qodobka ugu muhiimsan waa qurxinta mawduuca oo leh jawi fasax oo la abuuray. Ka dib markaad socoto waxaa laga heli karaa ururinta.
Qaybta aasaasiga ah waa filim daahir leh iyada oo aan la taaban waxyaalo farshaxan. Waxay ku haboon tahay isticmaalka meelaha kala duwan. Habka daabacaadda qaababka badan ayaa loo adeegsan karaa dusha sawir kasta ama calaamadda shirkadda. "Codal" - Waxyaabo leh lilac, casaan, casaan, cagaaran. Waxaa loogu talagalay qurxinta ubaxyada ubaxa. Nooc kale oo birta ah waa "Stripes", halkaas oo xariiqyada aan tooska ahayn ee casaanka iyo guduudka ah loo isticmaalo walxaha qurxinta.
Waxyaabaha cusub ee ka mid ah "Newspaper" oo leh qoraalka burgundy, cagaaran iftiin, huruud ah. "Jacayl" - filim daabacan oo ah qaabka wadnaha iyo qoraallada mawduuca. Naqshadeynta qurxinta ee hadiyadaha Maalinta Jacaylka. "Butterflies" waa nooc asalka ah hadiyado hadiyad ah oo loogu talagalay dadka jacaylka iyo carruurta. Fursadaha dhexdhexaadka ah waxaa ka mid ah "Phoenix" oo leh qaab-cad-lilac, "Curl" oo leh qaab cad, "Lily" iyo "Sabina" oo leh qurxin muuqaal ah. Qalabka cadarka iyo casaanka ayaa lagu rinjiyeeyay dusha Radmila.
Marka aad dooranayso qalabka wax lagu baakadeeyo, tigidhka dhererka iyo dhererka rukunka waa in la tixgeliyaa. Waxaa jira fursado badan oo la ururiyo:
70 cm x 7 m;
70 cm x 8,5 m;
70 cm x 6 m;
70 cm x 10 m;
72 cm x 7,5 m.
Polypropylene waa polymer aan khasaare ahayn oo si ballaaran loo qaybiyo xitaa warshadaha cuntada. Waxay leedahay shaqeynaya:
ma dhaafaan qoyaan;
ma qarinayaan muuqaalka alaabta;
wuxuu ka ilaaliyaa waxyaabaha ka yimaada burburka iyo boodhka.
Baakad tayo sare leh waxay haysaa qaabkeeda oo aan dillaacin. Faa'iidada kale waa noocyada kala duwan ee qaabeynta. Qurxinta jaalaha ah, sawirrada muuqda, wadnaha, ubaxyada iyo dhiciska ayaa lagu daboolaa dusha sare. Ururinta ayaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa, qaabab cusub ayaa u muuqda, palette midabka ayaa isbedelaya.
Waxaa laga helaa xargaha mitirada 10 - waa qeyb ka mid ah xisaabinta habboon ee loogu talagalay jumladaha iyo dhererka ugu fiican ee isticmaalka hal mar. Amarka ugu hooseeya ee dukaanka "Prime Decor" - 1 duub.
Caqli-galnimada kirada kirada
Laga soo bilaabo qaab tayo sare leh tayada alaabta dhamaysay
Soo saaraha "digaaga" khatarta ah ayaa ka jawaabay eedeymaha
Cuntada aan caafimaadka laheyn: Moscow, mashiinada iibinta ayaa ku sumoobey daraasiin dad ah
Waxaa la ogaaday "saliid" wasakh ah oo u muuqday ka hor "xaaladda saaxiibtinimo"
Aqoonyahanka Ruushka ayaa soo saaray mid ka mid ah siraha xasuusta